Nepal dia manolo-tena handray andraikitra amin'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nepal » Nepal dia manolo-tena handray andraikitra amin'ny fizahan-tany
Fizahan-tany azo idirana • Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Nepal • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Konferansa Iraisampirenena momba ny Accessible Adventure (ICAA) 2018 nifarana vao haingana tao Pokhara dia manambara toko vaovao iray amin'ny fanasamihafa ny fahafaha-manao goavana ateraky ny indostrian'ny fizahantany ao Nepal. Manerana izao tontolo izao ny tsenan'ny tsena azo idirana izay mikarakara indrindra ireo mpandeha sembana, zokiolona ary olona tsy afa-mihetsika dia lehibe. Pankaj Pradhananga, Tale ao amin'ny Four Season Traval and Tours, no lohalaharana tamin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany any Nepal hatramin'ny 2014, miaraka amin'ny Dr. Scott Rains. Nankasitraka ny kaonferansa izy ho toy ny dingana iray lehibe hahatongavana any Nepal ho toeran'ireo olona voafetra ny fivezivezena ary manana fahafaha-mandany, na Nepaley na teratany vahiny. “Tsy andro iray fotsiny fa Andro voalohany ho an'ny fitsangatsanganana an-tsokosoko any Nepal. Rehefa mandray sy manome hery an'ireo mpitsidika toy izany isika dia manokatra iray amin'ireo firenena tsara tarehy indrindra eto an-tany ho azy ireo miaraka amin'ny fahafaha-manao fidiram-bola vaovao sy tsaratsara kokoa ho an'io sehatra io, ”fizarana Pradhanang.
Izy io koa dia manamarika ny fiovan'ny paradigma amin'ny fomba fahitan'ny olona manana fahasembanana ao amin'ny faritra. Amin'ny alàlan'ny fizarana fanao sy traikefa tsara iraisam-pirenena avy amin'ny firenena izay mahazo tombony amin'ny fanokafana ny sehatry ny fizahan-tany ka hatramin'ny fampidirana azy ireo dia nanasongadina ny fomba ahafahan'ny Nepal mitarika ny faritra amin'ny fizahan-tany azo zahana. Ny fotodrafitrasa fizahantany nohatsaraina, ny serivisy ary ny fotodrafitrasa manokana, miaraka amin'ireo mpiasa voaofana mba hikarakarana ireo olona manana olana amin'ny fivezivezena dia lasa famatsiam-bola vaovao, tsena fidiram-bola vaovao ary fahafaha-miasa ho an'ny maro. Ity fihetseham-po ity dia navoakan'i Suman Timsina, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny International Development Institute (IDI) izay avy any Washington DC, mpiara-miasa amin'ny kaonferansa. John Heather, Program Chair, dia nanambara fa i Pokhara no ho maodely handehanan'ny fizahan-tany fizahan-tany ho an'i Nepal ary ny lesona ianarana avy ao dia halamina ho fampiharana ho an'ny sisa amin'ny firenena.
Renaud Meyer, talen'ny firenena UNDP, dia nanondro ny fizahan-tany azo idirana ho olan'ny zon'olombelona ary singa lehibe iray amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ho an'i Nepal raha mbola mamerina hatrany ny fanoloran-tenan'ny UNDP amin'ny fiadiana ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany any Nepal.
Deepak Raj Joshi, CEO, Nepal Tourism Board (NTB), izay nikarakara ny hetsika tamin'ny IDI, dia nanana fanantenana momba ny valin'ny kaonferansa. Nilaza izy fa ny hetsika toy izany dia fampatsiahivana ny governemanta sy ny fikambanana tsy miankina momba ny fanoloran-tena iraisana ilaina mba hifantohana amin'ny olana toy izany. Nanamafy ny fahavononan'ny NTB izy amin'ny fanaovana an'i Nepal ho toeram-pizahan-tany azon'ny rehetra idirana. NTB sy IDI dia niara-nanambara tamin'ny Konferansa fa manomboka izao i Nepal dia hankalaza ny fidirana amin'ny sehatry ny fizahan-tany isan-taona amin'ny 30 martsa. Mpitondra tenim-pitenenana nandritra ny Fihaonambe, Corporal Hari Budha Magar, izay veteranin'ny ady Gurkha ary amputee roa sosona, dia nahazo aingam-panahy ny mpihaino multinasional izay niverenany ny zava-niainany manerantany. Izy koa dia mikasa ny hamory ny Tendrombohitra Everest amin'ny taona 2019 ho ampahany amin'ny fitsidihana 'nofinofy nandresy'. Ny vahiny manan-danja hafa tamin'ny Fihaonambe dia misy an'Andriamatoa Scott DeLisi, masoivohon'i Etazonia teo aloha tany Nepal ary ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy mpandraharaha fizahantany manerana an'i Azia.
Sagar Prasai avy amin'ny NFD-N no hetsika emcee. Sumit Baral dia nandamina ny fotoana nifanaovana tamin'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny tanàna 5 ao anatin'izany ny Biratnagar izay nanambaran'izy ireo ny fahavononany hanao izay hahitan'ny rehetra ny tanànany. Toy izany koa, Andriamatoa RR Pandy, Nandini Thapa, Khem Lakai ary Divyansu Ganatra dia nandray anjara tamin'ny dinika natao tamin'ny panel 'Accessible Tourism - Challenges & Opportunities' notontosain'i Pankaj Pradhananaga.
Ireo mpiara-miombon'antoka lehibe tamin'ny kaonferansa dia ny NFD-N, CIL- Kathmandu, Four Season Travel & Tours, CBM, masoivohon'i India, Turkish Air ary Buddha Air.
Vokatra azo tsapain-tanana iray hafa tamin'ny fihaonambe ny fitokanana ny lalan-tongotra voalohany mizotra 1.24 km miala an'i Kaskikot ka hatrany Naundanda. Ny NTB dia nitarika izany tamin'ny fametrahana ny loharanom-bolany hanatsarana ny lalan-kaleha, isaky ny mpampiasa seza misy kodiarana GHT, zokiolona ary mpandeha miaraka amin'ny fameperana ny fivezivezena izay ho modely ho an'ny Nepal sy ny faritra midadasika. Nepal dia mety ho lasa toeran-kaleha hamela fitsangatsanganana ho an'ny rehetra.